Hahazo Fahefana Ivelan’ny Lalàna Hanakatona Habaka Ny Mpanara-maso Ny Aterineto Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2015 5:11 GMT
Toa mahazo fahefana (goavana) vaovao indray ny fanivanana ny aterineto ao Rosia. Sary avy amin'i Luis Prado ho an'ny Tetikasa Noun. Namboarin'i Tetyana Lokot.
Mety afaka manatsahatra ny fisoratana anarana ataon'ireo tranonkala ao amin'ny sehatra .ru sy .рф tsy misy didy avy amin'ny fitsarana ny Roscomnadzor, mpanara-maso ny aterineto sy fampahalalam-baovaom-panjakana ao Rosia atsy ho atsy. Hanitatra ny fahefan'ity andrim-panjakana ity izany, hamela azy hanakatona ireo habaka tsy ho hitan'ny Rosiana sy ny mpiserasera ivelan'i Rosia ihany koa.
Nanamafy tao amin'ny tranokalam-baovao Slon ny mpitondra tenin'ny Roscomnadzor, Vadim Ampelonsky fa mizotra mankany amin'ny fanakatonana tranonkala bebe kokoa ny mpanaramaso, Roscomnadzor. Nitatitra ny gazety mpivoaka isan'andro Izvestia, mpomba ny governemanta vao maraina fa ny asa vaovaon'ny Roscomnadzor dia mety hodinihana mandritra ny fivorian'ireo solontenan'ny Rosiana mpanao fanivanana miaraka amin'ireo manampahefanan'ny Minisiteran'ny Fifandraisana sy ny solontenan'ny foibe fandrindrana ny anaran-tsehatra nasionaly (aterineto) ao Rosia, izay mampanankery ny fitsipika fisoratana anarana ao amin'ny sehatra Rosiana .ru sy .рф (sehatra Rosiana Syrilika).
Ahafahan'ny Roscomnadzor hampihatra fahefana ivelan'ny lalàna avy amin'i Kremlin hanakana tanteraka ireo tranonkala amin'ny alalan'ny fanongotana tombondahiny amin'ny fanoratana anaran-tsehatra manokana izany, ary izany no mametra ny fidiran'ny mpiserasera ao Rosia sy any ivelany.
Amin'izao fotoana izao, manan-jo hampiditra anaty lisitra mainty ireo habaka sy rohim-pejy ho an'ny mpiserasera ao Rosia ny mpanaramason'ny governemanta, izany midika fa mbola azon'ny mpiserasera ivelan'i Rosia (sy ho an'ny Rosiana mampiasa fitaovana fihodidinana hidirana amin'ny habaka voasakana) jerena ny votoaty ao aminy. Toriana any amin'ny Roscomnadzor amin'ny alalan'ireo andrim-panjakana isan-karazany hafa manaramaso ny RuNet ny rohin'ny fitaovana heverina fa tsy ara-dalàna. Mampitandrina ireo mpandrindra ny tranonkala amin'ny fitarainana aloha ny mpanaramaso ny aterineto, ary raha mbola tsy nofafana ny votoaty manafintohina dia ampidirina ao anaty lisitra mainty ny habaka. Tranokala an'arivony, anisan'izany ny YouTube sy ny Wikipedia no efa tafiditra tao anatin'ny lisitry ny tranonkala voakatona tao anatin'ny telo taona.